राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, ‘सत्ताधारी नेकपाको एक नम्बर नेता प्रचण्ड नै हो, प्रचण्डजस्तो चलायमान नेता अरु छैनन्’
केपीले प्रचण्डलाई पार्टी बुझाउलान् ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले जे भन्छ, त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो । मैले मन पराए पनि, नपराए पनि अब नेकपाको नेता भनेकै प्रचण्ड हो । स्थितिले अहिलेको चलाख, चलायमान, सत्तालाई बुझ्ने र सत्तालाई प्रयोग गर्नसक्ने कोही छ भने नेकपाको नौ जनामध्ये प्रचण्ड नै एक नम्बरमा हुनुहुन्छ । हिजोको परिवेशले ओलीजी एक नम्बर बन्नुभएको छ । उहाँ सुस्ताएपछि प्रचण्ड नै एक नम्बरको नेता हो भन्ने मलाई लाग्छ । अरु नेता एक नम्बरमा आएर प्रचण्ड दुई नम्बरमा पुग्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
समाजवाद र पुँजीवादी कार्यदिशामा बहस हुँदा माधव नेपाल केपीको पुँजीवादी लाइनमा देखिए । तर, रघुजी पन्त, बेदुराम, घनश्याम, योगेशलगायत उनी पक्षधर नेता अर्को लाइनमा देखिए । खासमा माधव नेपालले अब के गर्लान्जस्तो लाग्छ ?
यो कथनको कुरा हो । नौ जनाको व्युरोले समाजवादी कार्यक्रम यस्तो छ, यसरी लागू गर्नुपर्दछ भनेर जनसमक्ष ल्याएको छैन । अहिलेको कायैक्रममा पुँजीवाद र समाजवाद लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छन् । तर आए–सकिए । त्योभन्दा अगाडि बहस हुँदैन । कार्यकर्ता, जनतामा आउनु प¥यो । स्थायी कमिटीको बहसमा छ्यास्स–छ्यास्सबाहेक देश निर्माणको बारेमा बहसै हुन्दैन । मेरा मान्छे मसरी नियुक्त गर्ने, राजदूत, मन्त्री कसलाई बनाउनेजस्ता भागबण्डाका चर्काचर्का कुरा हुन्छन् । जहाँ पनि ओलीजीकै मान्छे राख्नुुभएको छ । निलाम्बर आचार्य एकजना ओलीको पुराना गुटमा नपरेको मान्छे मर्नुभयो । पर्यटनमन्त्रीबाहेक अरु सबै मन्त्री ओली गुटकै । रवीन्द्र्र अधिकारी कसरी मन्त्री बन्नुभयो ? मन्त्री बनेपछि भड्खालोमा पर्नुभयो । हेर्नुहोस् त, सम्भावना भएको एउटा युवालाई रेटी–रेटी सिध्याउन खोजिएको रमिता हामी हेर्दैछौँ । यसको यथार्थ भोलिका दिनले प्रष्ट्याउला । समाजवादी, जनवादी कार्यक्रमको कुनै छलफल–बहसै छैन । यो पार्टीले देशलाई समाजवादी दिशामा लैजाला भनेर जनतामा त छोडौँ, कार्यकर्तामै विश्वास जगाउन सकेको छैन । त्यहाँ नीतिगत होइन्, स्वार्थको टसल छ ।
झलनाथ, वामदेवहरुलाई पहिल्यै पनि माओवादीनिकट भनिन्थ्यो । अब उनीहरु प्रचण्डसँगै रहलान् ?
ठ्याक्कै यसै भन्न सकिन्न । उहाँहरुको स्वार्थ कता–कता मेल खान्छ, सिद्धान्त र देश निर्माण अभियानका लागि प्रचण्डलाई बीचमा राखेर अरु आलीको खिलाफमा अाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हो ।
जनअास्थासँगकाे कुराकानीकाे सानाे अंश ।